Maalinta Dhaqanka Puntland oo Garowe laga Xusay – Radio Daljir
Febraayo 3, 2016 6:59 b 0
Arbaco, Feberaayo 03, 2016 (Daljir) —Munaasabad lagu soo bandhigayey Maalinta dhaqanka Puntland oo loo aqoonsaday 3-da Bisha febraayo ayaa maanta lagu qabtay Magaalada Garoowe ee Caasimada Puntland waxaana soo qabanqaabiyey ururka Haweenka Puntland.
Xaflada ayaa waxaa ka soo qayb-galay Wasiirka arimaha Gudaha dowladaha hoose iyo horumarinta reer miyiga Axmed Karaash,Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Puntland,Xildhibaan Cabdibare Yuusuf Jibriil oo kamid ah Baarlamaanka Soomaaliya iyo haweenka ka kala socday ururada haweenka 9-ka Gobal ee Puntland.
Xaflada ayaa sidookale lagu soo bandhigay natiijadii ka soo baxday bandhig dhaqameed lagu ay ururka haweenka Puntland kaga soo qayb-galeen Magaalada Muqdisho oo lagu xusayey Maalinta Afsoomaaliya waxaana munaasabada lagu soo bandhigay agabyada kala duwan ee hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed.
Gudoomiyaha Haweenka ururka haweenka Puntland Khadro Warsame Jaamac oo munaasabada ka hadashay ayaa sheegtay in ururka haweenka Puntland uu kaalimaha hore ka galay dhaqanka iyo hadaha Soomaaliyeed ayna guulo waaweyn ka soo hooyeen Maalinta afsoomaaliga oo lagu soo bandhigay dhaqanka Soomaaliyeed.
Gudoomiyaha ururka Haweenka Gobalka Mudug Dhudi Yuusuf oo kamid ahayd haweenkii ka qayb-galay maalinta afsoomaaliga ayaa sheegtay in lagu tartamayey 3 dhibcood oo dhaqanka ah ayna soo qaateen labo kamid taas oo ka turjumaysa aqoonta iyo dadaalka dheer ee haweenka Puntland ay galiyeen soo noolaynta dhaqanka iyo hidaha soomaaliyeed.
Wasiirka Haweenka Wasaarada Arimaha Gudaha Dowladaha hoose iyo Horumarinta reer miyiga Puntland munaasabada daahfuray ayaa ugu horayn uga mahadceliey haweenka Puntland Guusha ay ka soo gaareen Magaalada Muqdisho,waxaana uu sheegay inay dowladu ay u qorshaynayso inay ururka haweenka Puntland loo dhiso hoy ay ku soo bandhigaan agabka dhaqanka iyo hidaha si caalamka loogu iibgeeyo looguna soo daawasho tago.
3-da bisha Febaraayo ayaa maanta loo aqoonsaday inay noqoto Maalinta dhaqanka iyo Hidaha Puntland si loogu soo bandhigo agabka hidaha iyo dhaqanka ee ay sameeyaan Haweenka Puntland oo xirfad dheeraada u leh Samaynta agabka hidaha iyo dhaqanka.